Other 🍉 - Teresa__koee - Wattpad
(Lovely My Little World)(ချစ်သောကမ္ဘာငယ်လေး) (ခဈြသောကမျဘာငယျလေး)(Z+U)(S1)
652K 53.3K 41
🔺S(1) 🔺ဇာတ်လမ်းပါအကြောင်းအရာများသည် စိတ်ကူးသက်သက်သာဖြစ်ပါသည်။ 🔺Abuse type ဖြစ်၍ အထူး ကြိုတောင်းပန်အပ်ပါသည်။ 🔺အပိုင်း(၁) မှ အပိုင်း(၄၀) 🔺S(1) 🔺ဇာတျလမျးပါအကွောငျးအရာမြားသညျ စိတျကူးသကျသကျသာဖွဈပါသညျ။ 🔺Abuse type ဖွဈ၍ အထူး ကွိုတောငျးပနျအပျပါသညျ။ 🔺အပိုငျး(၁) မှ အပိုငျး(၄၀)
(Lovely My Little world) (ချစ်သောကမ္ဘာငယ်လေး) (ခဈြသောကမျဘာငယျလေး)(Z+U) (S2)
964K 105K 36
🔺(S2) 🔺S1 လေးအရင်ဖတ်ပေးပါနော်။ 🔺ဇာတ်လမ်းပါအကြောင်းအရာများသည် စိတ်ကူးသက်သက်သာဖြစ်ပါသည်။ 🔺Abuse type ဖြစ်၍ အထူး ကြိုတောင်းပန်အပ်ပါသည်။ 🔺အပိုင်း(၄၁) မှ final 🔺(S2) 🔺S1 လေးအရငျဖတျပေးပါနျော။ 🔺ဇာတျလမျးပါအကွောငျးအရာမြားသညျ စိတျကူးသကျသကျသာဖွဈပါသညျ။ 🔺Abuse type ဖွဈ၍ အထူး ကွိုတောငျးပနျအပျပါသညျ။ 🔺အပိုငျး(၄၁) မှ fin...
979K 110K 42
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ အကြောင်း လာဆွေးနွေးတဲ့အခါ.... ယုံကြည်မှုတွေလိုအပ်ကြောင်း ကိုယ်ပြန်သင်ပေးပါရစေ.... ခဈြခွငျးမတ်ေတာ အကွောငျး လာဆှေးနှေးတဲ့အခါ.... ယုံကွညျမှုတှလေိုအပျကွောငျး ကိုယျပွနျသငျပေးပါရစေ....
The True Conqueror [Complete]
1.9M 246K 93
Name - The True Conqueror (အောငျနိုငျသူအရှငျ) တောငျပိုငျဘုရငျကွီးလငျးမိုနှငျ့ မွောကျပိုငျးအိမျရှစေံ့ လီခနျြးယုံတို့၏ ကွညျနူးဖှယျ ဒဏ်ဍာရီတဈပုဒျ... Name - The True Conqueror (အောင်နိုင်သူအရှင်) တောင်ပိုင်ဘုရင်ကြီးလင်းမိုနှင့် မြောက်ပိုင်းအိမ်ရှေ့စံ လီချန်းယုံတို့၏ ကြည်နူးဖွယ် ဒဏ္ဍာရီတစ်ပုဒ်...
Devil's Wings for Angel(နတ်ဆိုးမဟုတ်သော နတ်ဆိုးတစ်ပါး)
29K 2.9K 22
အရှင်သခင်သီရွန်... .....နတ်ဘုရားတစ်ပိုင်း နတ်ဆိုးတစ်ပိုင်း/ ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာ သူလိုမျိုးမစစ်တဲ့သူကို မထားဖူးဆိုတဲ့ အမိန့်နက် ငရဲကမ္ဘာမှာ စွန့်ပစ်ထားခြင်းခံခဲ့ရသူတစ်ယောက်။ သူ့ဆို လူသားမျိုးနွယ်တွေအပါအဝင် နတ်ဆိုးအားလုံးက ဖိန့်ဖိန့်တုန်အောင်ကြောက်ရတယ်။ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း ဘယ်သူဘယ်ဝါကိုမှ ညာတာတက်တဲ့သူမဟုတ်....။ ဒေမီယန်...
ᴍᴀɴʜᴡᴀ ʀᴇᴄᴏᴍᴍᴇɴᴅᴀᴛɪᴏɴ ✨
100K 558 69
Recoммeɴdαтιoɴ ғor ɢrαpнιc ɴovel reαderѕ • ιғ yoυ wαɴт weвѕιтeѕ тo reαd ғeel ғree тo мeѕѕαɢe 100k on Dec. 1 2020
The Secret Affair | 18+
201K 2.8K 44
A sinful love affair andadark past. Ari is not your typical girl working under powerful people. She knows many secrets that can damage others around her. Withasharp tongue and alluring sex appeal, she seems to interest many men around her. But what happens when she gets caught in her own secrets and affairs? How...
YAOI manhwa RECOMMENDATION
61.6K 226 14
Feel free to look in my Reading list ~hope you like it. . . . All summary written here are all taken from Lezhin or any Site.
Yaoi Manhwa Recommendations BL🏳️‍🌈
432K 2.4K 35
If you are searching for some BL webtoons to read, you have come to the right place my child. Archive for all the manhwas that I read and are planning to read. Mostly BL cause this BCH here is thirsty for some yaoi😂 I don't own the coverpic, I found it on Pinterest.
Yaøi Manga Recommendations
689K 3.4K 137
Do you like reading Yaoi Manga ? Then here you go...acomplete yaoi manga, manhua & manhwa recommendation book for my little manga Lovers. I DO NOT TAKE CREDIT FOR ANY RECOMMENDED MANGA HERE. THEY ARE SOLEMNLY THE HARD WORK OF THE AMAZING CREATORS. Thank you & Happy reading. Highest Ranking : #1 in slash #14 in sugge...
BL/yaoi that I recommend
7.8K 38 5
manga,web series,and anime Nothing is mine
1.3M 137K 174
I don't own this story so I give full credit to the original author (uploader). Facebookမှာတင်ပြီးတဲ့ ကျွန်တော်transပြီးသား manhwaလေးတွေကို wattpadမှာစုတဲ့အနေနဲ့တင်တာပါ #Hoo
ကြောငျးလူဆိုးလေးက လာကွိုကျနတော ဘယျလိုလုပျရပါ့ [ဘာသာပွနျ]
454K 77.1K 91
Title - What should I do if the school bully is interested in me Author - 时闲 Total Chapters - 90 Genre - Modern, School Eng Translator - Flareax Myanmar Translator - Kay_Wine 😉 Novel link- https://chrysanthemumgarden.com/novel-tl/sbim/ I have permission to translate this novel.
Manga , Manhwa & Manhua
351K 2.5K 200
Compilation of Manga, Anime, Manhua, Manhwa, and Novels I read or watch.
368K 2.1K 46
˙★♡°✩Just some manhwa recommendation coming ahead˙★♡°✩
Back In Time: Iceland x Reader Hetalia!
4.8K 136 11
(Y/n) is givenastone that sends her back in time to the viking age. As she runs from Norwegian vikings and paranoid British people, she meets Iceland. Then almost gets herself killed multiple times. Enjoy! Picture by Ailiaine-ai on deviantart. Hetalia by Hidekaz Himaruya.
474K 32.3K 34
Fell in Love With My Sister's Boyfriend(S 1 Completed)
1.1M 64.4K 86
Webtoon Myanmar Translation Don't read if you don't like Yaoi Crd to Author-Ni Sansui STATUS-Completed🔒 Source-Wecosmic 💯I am NOT the owner of this Manga I just translated it,cause I want to share good things with others💯
104K 5.2K 16
#I just translate this manhwa #I own nothing. #Credit to Original Author
" Sister's Boyfriend" (S-2)(Completed)
382K 35.7K 47
"I'm not the owner of that comic,I'm justatranslator" Crd to- Author-Ni SANSUI🙇 Art by-Yan Wei Nai Shuang🙇 Status-Completed🔒 Genre-Romance,Yaoi👨‍❤️‍👨 Source-WeCosmic🍑
1.2M 111K 139
ALPHA , OMEGA ပုံစံပါ ! 🚨🚨(Completed) "I'm not the owner of this Webtoon , I'm justatranslator" Crd to - Author(s) : Tim Alchem Translator :Sumin Jo Editor :Letitia Wells
317K 28.3K 26
ခင်ဗျားကိုချစ်နိုင်ဖို့ ကျင့်ဝတ်ဆိုတာတွေမေ့ပြီး ဘဝကိုခပ်ရှုပ်ရှုပ်လေး ဖြတ်သန်းကြည့်မလားလို့... လူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုသဘောဆောင်တာတွေ ပါတာကြောင့် အဆင်ပြေမှ ဖတ်ပါနော်! - Dilemma Mania - ခငဗြွားကိုခစွနြိုငဖြို့ ကငွ့ဝြတဆြိုတာ တှမပှေီ့း ဘဝကိုခပရြှုပရြှုပလြေး ဖှတသြနြးကှည့မြလားလို့... လူမှုရေးဖောကျပွနျမှုသ...
One Week Limit (MM Translation)
452K 31.4K 64
#bl #school life
Secret Love (English)
11.6K 359 37
Percintaan dua anak SMA yang comedy dan romance